आफ्नो लिंग भाँचिएपछि कमेडियनले त्यसैबारे लेखे पुस्तक - रोचक - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
| ७ चैत २०७५, बिहिबार
आफ्नो लिंग भाँचिएपछि कमेडियनले त्यसैबारे लेखे पुस्तक
करिब तीन वर्षअघि न्युयोर्कका ३२ वर्षीय कमेडियन तथा फिल्म निर्माता रोज अस्दुरियनले आफ्नो एक पुरानो साथीलाई बारमा भेटे। अस्दुरियनले उनलाई म्यानहटनको इस्ट भिलेजस्थित आफ्नो अपार्टमेन्टमा लिएर गए। उनीहरुबीच यौन सम्बन्ध बन्यो।
‘हामी अन्तिमअन्तिमतिर पुग्दै थियौँ। मैले प्याट्ट आवाज सुनेँ,’ उनी भन्छन्।
त्यो आवाज सुनेपछि उनी झस्किए। ‘मेरो सबैभन्दा ठूलो डरमध्ये एक यथार्थ बनेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तुरुन्तै केही न केही गडबड भयो भन्ने मलाई थाहा भइसकेको थियो। त्यसैले म आकस्मिक उपाय अपनाउनपट्टि लागेँ। एकदुई पटक मैले पीडामा गहिरो सास फेरेँ। उत्तानो पल्टिएँ, बत्ती बालेँ र एम्बुलेन्सलाई फोन गरेँ।’
अस्दुरियनको लिंग भाँचिएको थियो। तर चिकित्सकीय भाषामा भन्दा उनको कर्पस क्याभर्नोसा टुटेको थियो। ‘लिंगमा हड्डी हुँदैन, त्यसैले मानिसहरु लिंग भाँचिएको कुरा पत्याउँदैनन्। त्यसैले भाँचिनुभन्दा चुँडिनुचाहिँ उपयुक्त शब्द हुनसक्छ,’ टेम्पल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक ज्याक मिड्लो भन्छन्।
माउन्ट सिनाइ हस्पिटल, न्युयोर्कका डा. राजवीर पुरोहितका अनुसार कर्पस क्याभर्नोसा भनेको लिंगसँगै टाँसिएको तन्तु हो। जब पुरुष उत्तेजित हुन्छ, कर्पस क्याभर्नोसा फैलिन्छ। ‘यो लिंगमा मात्र हुने अनौठो तन्तु हो,’ उनी भन्छन्। यो तन्तुमा अत्याधिक दबाब परे यो टुट्ने उनी बताउँछन्।
एम्बुलेन्स आएपछि अस्दुरियनलाई वेइल कर्नेल मेडिकल सेन्टर पुर्‍याइयो। जहाँ युरोलोजिस्टहरुको एक समूहले उनको परीक्षण गर्‍यो।
‘डा. वाङले सबैभन्दा पहिले मेरो सिस्टोस्कोपी गरे। त्यसपछि मलाई जगमा पिसाब फेर्न लगाइयो। त मैले पिसाब गर्न सकिनँ। पिसाब नै फेर्न नसक्ने हुनुको अर्थ यो निकै ठूलो खतराको कुरा थियो।’
क्यामराजडित नली लिंगबाट प्रवेश गराएर मुत्रमार्ग र पिसाबथैलीको परीक्षण गर्न सिस्टोस्कोपीको प्रयोग हुन्छ। सामान्यतः मुत्रनलीमा पत्थरी भए, पिसाबमा रगत देखिए, प्रोस्टेट वा मुत्रथैलीमा चोट लागे यसको प्रयोग गरिन्छ।
सिस्टोस्कोपीबाट पुष्टि भयो, अस्दुरियनको मुत्रमार्ग च्यातिएको रहेछ।
मिड्लोका अनुसार लिंग भाँचिनु भनेको अत्यन्त विरलै हुने घटना हो। तर यसको संवेदनशीलताका कारण मानिसहरुले सोचेभन्दा बढी यस्तो घटना हुने गर्दछ। आफूले महिनामा एक वा दुई यस्तो घटना देख्नेगरेको उनी बताउँछन्।
‘दुःखको कुरा के छ भने समान्यतयाः बिरामीहरु डाक्टरकहाँ जान लजाउँछन्,’ मिड्लो भन्छन्, ‘प्रायःजसो यस्ता मानिस युवा हुन्छन् र उनीहरुको अघिल्तिर पूरै जीवन बाँकी हुन्छ। उनीहरु चुपचाप यो किन सहन्छन्? यसमा लजाउने कुरा छैन। यस्तो हुन्छ।’
२००२ मा गरिएको एक अध्ययनमा सन् १९३५ यता १३०० यस्ता बिरामीको पहिचान गरिएको थियो। जसमध्ये आधाजसो मुस्लिम राष्ट्रका थिए। आफ्नो उत्तेजना लुकाउन अपनाउने खतरनाक उपायका कारण मुस्लिम राष्ट्रमा धेरैको लिंग भाँचिने गरेको बताइन्छ। ‘खासगरी मध्यपूर्वमा मानिसहरु आफ्नो उत्तेजना दबाउन चाहन्छन् किनभने यसप्रति उनीहरु लजाउँछन्,’ पुरोहित भन्छन्।
पुरोहितका अनुसार अस्दुरियन अस्पताल पुगेको भोलिपल्ट तीन घन्टा लामो शल्यक्रिया गरेर उनको चोट ठीक गरियो। ‘मैले उनको युरेथ्रोप्लास्टी गरिदिएँ,’ उनी भन्छन्।
चार साताको स्वास्थ्यलाभपछि अस्दुरियन आफैँ पिसाब फेर्न सक्ने भए। केही महिनापछि उनी यौनकर्मका लागि योग्य भए।
‘रोसको उत्तेजना कायम रह्यो। उनको पिसाबको धारा पनि पूर्णतः सामान्य छ। त्यसैले यसको खास नकारात्मक परिणाम देखापरेन,’ पुरोहित भन्छन्।
आफ्नो यही अनुभवलाई समेटेर अस्दुरियनले एक पुस्तक लेखेका छन्, जसको शीर्षक छ, ‘ब्रोकेन बनाना।’
‘मलाई आशा छ, यो पुस्तकले मानिसहरुलाई हँसाउनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ, हरेक व्यक्तिसँग सुनाउने कथा हुन्छ। र मेरो कथा चाहिँ यस्तो हुन गयो।’ सिएनएन
प्रकाशित ६ बैशाख २०७५, बिहिबार | 2018-04-19 16:14:39
चीनकी एक महिलाले स्वस्थ हुने चाहानाका साथ फलफुलको रसको इन्जेक्सन लगाइन्। तर, त्यो उनको जीवनकै सबैभन्दा ठूलो भूल हुन पुग्यो।
भारतको बिहार राज्यस्थित डुमरी छपिया गाउँकी एक बेहुलीले मदिरा सेवन गरेर बिहे मण्डपमा आइपुगेका बेहुलासँग विवाह गर्न अस्वीकार गरेकी छिन्।
एक धनाढ्य पिताले भनेः मेरो कुमारी छोरी विवाह गर, करोडौं उपहार दिन्छु
थाइल्याण्डका एक धनाढ्य व्यक्तिले आफ्नो कुमारी छोरी विवाह गर्ने पुरुषलाई २ लाख ४० हजार पाउण्ड दिने घोषणा गरेका छन्।
आवश्यक भन्दा बढी निन्द्रा खतराको घण्टि!
संसारभरमा करिब एकतिहाइ जनसङ्ख्या अनिन्द्राको समस्याबाट ग्रसित छन्। तर कोही यस्ता मानिस पनि छन् जसलाई जुनबेला पनि निन्द्रा लागिरहन्छ र कुनै काममा...
टेपले बेरिएका १५ सय दुर्लभ कछुवा लगेजभित्र देखिएपछि...
फिलिपिन्स प्रहरीले तस्करी हुन लागेको १५ सय लोपोन्मुख कछुवा लगेजभित्र फेला पारेका छन्।
शरीरको ऊर्जा वृद्धिः कफीलगत्तै ‘पावर न्याप’
न्याप लिनुका फाइदाहरूको बारेमा व्याख्या गर्न अनेकौँ प्रमाणहरू भेटिन्छन्।
२८ फागुनमा प्रतिबन्धको घोषणा गर्नुअघि प्रम ओली विप्लव समूहप्रति जति आक्रामक थिए, त्यति आक्रामक त्यसयता देखिन्नन्। विप्लव समूहले पनि प्रतिबन्ध अघि जस्ता धमाकापूर्ण विस्फोट गराएको थियो, प्रतिबन्ध यता...
भ्रष्टाचार घटाउन यस्तो उपाय
शिव गौतम र उत्तमबाबु श्रेष्ठ
सीकेसँगको सम्झौताका चार कमजोरी
लक्ष्मी लम्साल बेइजिङ, - बेइजिङका लिउ भन्छन्ः चीनको सभ्यता विकासमा नेपालको ठूलो योगदान छ।
नायिकासँग मेरो जति अफेयर कसैको भएन होलाः किशोर नेपाल
पत्रकारिता तेस्रो सेमेस्टर अन्तिम परीक्षा आइरहेकाले भर्खरै बिग्रिएको मोबाइलको डिस्प्ले बनाउन मन लागेन।
राजेश हमालकी श्रीमती हुनासाथ महिला बाठो भइहाल्छन्?
चैत ७ - फेसबुकको स्वामित्वमा रहेको सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राम एपले इकमर्स वेबसाइटको जस्तै सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ।
एप्पलले ल्याउँदै नयाँ फोल्डिङ फोनः आइफोन एक्स फोल्ड
बडिमालिका नगरपालिका सबै वडामा इन्टरनेट जडान, प्रविधिमैत्री सेवा शुरु
चैत ६ - चीनकी एक महिलाले स्वस्थ हुने चाहानाका साथ फलफुलको रसको इन्जेक्सन लगाइन्। तर, त्यो उनको जीवनकै सबैभन्दा ठूलो भूल हुन पुग्यो।
अब नागरिकतामा उपनाम पनि राख्न सकिने
शशांक, सीके र पशुपतिहरु किन चाहन्छन् जनमतसंग्रह? सबैका आ-आफ्नै स्वार्थ
एसईई परीक्षाको तयारीमा सांसद शान्ता चौधरी, लक्ष्य पीएचडी
स्थानीय तहमा मनपरीः कर्मचारी रिझाउन तलब वृद्धि
बच्चालाई पर्याप्त दूधको लागि आमाले के खाने ?
विप्लव समूहको यस्तो छ पार्टी संरचना
नेपाली सेनाले भन्योः विप्लव समूहमाथि वल प्रयोग होइन, राजनीतिक समाधान खोज
हङकङको आकाशमा निष उपाध्यायको ‘गुड फ्लाइङ’ (भिडियो)
‘हङकङमा २०११ देखि व्यवसायिक रुपमा प्याराग्लाइडिङ उडाउँदै आएको छु। मैले उडाउने धेरै मानिस चिनियाँ र केही नेपाली साथीभाइ हुन्छन्। पैसा लिएर होइन,...
ट्वीटरका सेलिब्रिटी यी ट्याक्सी ड्राइभर
‘शैक्षिक प्रमाणपत्र सिरानीमुनि राखेर ट्याक्सी चलाइरहेको छु। होइन–होइन, जिन्दगी चलाइरहेको छु।’
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व मिलाइदिन्छु भनी ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकसँग...
आफ्नो मोवाइलबाट जसले ओली–प्रचण्डबीच पहिलो संवाद गराए
नेपालमा भर्खरै भित्रिएले मोबाइल निकै दुर्लभ मानिन्थ्यो। प्रचण्डको प्रतिनिधि बनेका जीवन्त मोबाइल फोन बोकेर ओलीनिवास पुगेका थिए। जीवन्तले मोबाइलबाट...